Dagaal Khasaare Keenay Oo Maamullada Puntland Iyo Gal-mudug Gaalkacyo Ku Dhexmaray | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Dagaal Khasaare Keenay Oo Maamullada Puntland Iyo Gal-mudug Gaalkacyo Ku Dhexmaray
Galkacyo:(Hubaal)-Wararkii ugu dambeeyay ee aynu ka heleyno Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in Dagaal qadhaadhi dhexmaray maamullada Puntland iyo Gal-mudug, kaas oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira. Dadkii ku dhaawacmay Dagaalka ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa loola cararay isbitaalada ku yaalla Magaalada Gaalkacyo, iyada oo ay jiraan meydad tiro badan oo shacab iyo ciidanba iskugu jiraa.
Warar madax banaan ayaa sheegaya Dagaalka u dhaxeeyey labada Maamul ee Puntland iyo Galmudug in ay isku adeegsanayaan Hubka nuucyadiisa kala duwan, sidoo kalena dadka halkaasi degan ay sameynayaan barakac.
Labada Maamul Maxay ka YIdhaahdeen?
Dhanka kale Gudoomiyaha Magaalada Gaalkacyo ee dhanka Maamulka Puntland Maxamuud Yaasiin Axmed ayaa dhankiisa sheegay in Dagaalku aanu u dhaxeynin labada Maamul balse uu u dhaxeeyo dad shacab ah oo labada dhinac kala degan.